ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | USAHello သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ | USAHello
သင့်ရဲ့ privacy ကိုကျွန်တော်တို့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်.
USAHello သင့်ရဲ့ privacy ကိုရိုသေလေးစား.
သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်သရုပ်ပြ, ကြှနျုပျတို့က်ဘ်ဆိုက်၏သင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုအပေးသတင်းအချက်အလက်များပြုမူဆက်ဆံပုံကိုရှင်းပြရန်ဤ privacy ကိုမူဝါဒကဖန်တီး. ဤမူဝါဒသည့်အချိန်တွင်မဆိုပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါ, အသစ်ပြုပြင်ပြဌာန်းထားသောသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီအသစ်ပြုပြင်ပြဌာန်းထားသောသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ posted ဖြစ်ပါတယ်ရက်စွဲပြီးနောက်ကျွန်တော်ခံယူသတင်းအချက်အလက်လျှောက်ထားတံ့သောအမှု၌.
ဒါဟာ privacy ကိုအသိပေးများအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုအလေ့အကျင့်တွေ့ရမှာပါ usahello.org. ဒါဟာ privacy ကိုအသိပေးဤဆိုဒ်အားဖြင့်စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်မှတစ်ခုတည်းကိုသာသက်ဆိုင်သည်. ဒါဟာအောက်ပါတို့မှသငျသညျကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်:
အဘယ်အရာကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်သင့်ထံမှကောက်ယူနေသည်, ကအသုံးပြုသည်အဘယ်သူကိုနှင့်အတူက shared စေခြင်းငှါဘယ်လို.
သင့်ရဲ့ဒေတာများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သင်တို့ဆီသို့မရရှိနိုင်ပါကဘာလဲရွေးချယ်မှုများမှာ.
သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းမှု, အသုံး, နှင့်ဝေမျှ
ကျနော်တို့အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးတည်းသောပိုင်ရှင်တွေကဒီ site ပေါ်တွင်စုဆောင်းနေကြသည်. ကျနော်တို့ကအီးမေးလ်သို့မဟုတ်သင်အခြားတိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်များမှတဆင့်သင်ဆန္ဒအလျောက်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးသောသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း / မှ access ကိုသာရှိတယ်. ကျနော်တို့မည်သူမဆိုဤသတင်းအချက်အလက်ရောင်းချသို့မဟုတ်ငှားရမ်းမည်မဟုတ်.
non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်အချက်အလက်များနှင့် cookies များကို
ကြှနျုပျတို့၏ website သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်., ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုကဲ့သို့သောသင့် IP address ကိုသငျတို့သွားရောက်ကြည့်ရှုဝဘ်စာမျက်နှာများကိုအဖြစ်သင့်အကြောင်း Non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း. ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာအား "cookies များကို" ပေးပို့နိုင်ပါသည်. တစ်ဦးက "cookie ကို" သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုစလှေတျနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ဧည့်သည်ကိုအသိအမှတ်မပြုကူညီပေးသည်ကြောင်းယင်း၏ hard drive ပေါ်တွင်သိုလှောင်ထားသေးငယ်တဲ့စာသားဖိုင်ဖြစ်ပါသည်, မှတစ်ဦးချင်းစီဧည့်သည်ရဲ့ဖြစ်ပွားနေသော access ကိုလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဘာသာစကားများသင်ဖတ်နှင့်အတွက်သင်ယူဖို့ပိုနှစ်သက်သောအရာကိုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ၏အသုံးပြုမှုကို, နှင့်အသုံးပြုမှုအပြုအမူကိုခြေရာခံ. ငါတို့သည်သင်တို့၏ browsing အတွက်အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် "cookies များကို" ကိုသုံးပါနှင့်အခြား Non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း.
ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်သင့်တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်
အကြှနျုပျတို့သညျကိုတုံ့ပြန်ရန်သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရာအကြောင်းရင်းနှင့် ပတ်သက်.. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းပြင်ပရှိမည်သည့်တတိယပါတီနှင့်အတူသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဝေမျှမည်မဟုတ်, သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သောမဟုတ်လျှင်, ထိုကဲ့သို့သောဘွဲ့ရသင်တန်းအပ်နှံအဖြစ်.
သငျသညျမကျွန်တော်တို့ကိုမမေးမထားရင်, ငါတို့သည်ငါတို့၏အစီအစဉ်များအကြောင်းသင့်ပြောပြရန်အနာဂတျမှာအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်စေခြင်းငှါ, အတန်း, ဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေးမှ updates များကို, နှင့် / သို့မဟုတ်ဤ privacy ကိုမူဝါဒ updates များကို.
သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဆီကတစ်ခုခုအနာဂတ်အဆက်အသွယ်များထဲကရွေးချယ်စေခြင်းငှါ. သငျသညျမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအောက်ပါအချက်များကိုလုပျနိုငျ: privacy@usahello.org.
ပြောင်းလဲမှု / မှန်ကန်သော / သငျသညျအကွောငျးကိုကြှနျုပျတို့ဆိုဒေတာကိုဖျက်.
သင့်ရဲ့ဒေတာများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သင်ရှိသည်ဆိုစိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆို.
ငါတို့သည်သင်တို့၏သတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူ. သင်က်ဘ်ဆိုက်ကနေတဆင့်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များတင်ပြလိုက်တဲ့အခါ, သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းနှစ်မျိုးစလုံးကိုကာကွယ်ထားသည်.
ကျနော်တို့အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းနေရာတိုင်းမှာ (ထိုကဲ့သို့သောခရက်ဒစ်ကဒ်ဒေတာအဖြစ်), သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံတဲ့လမ်းအတွက် encrypt လုပ်ထားတဲ့ကိုကူးစက်. သင်ကလိပ်စာဘားထဲမှာသော့ခတ်အိုင်ကွန်ရှာနေနှင့်ရှာနေဖွငျ့ဤအတည်ပြုရန်နိုင်ပါတယ် “https” Web ကိုစာမျက်နှာ၏လိပ်စာရဲ့အစမှာ.
ကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်းမှတဆင့်ကူးစက်သောအထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ encryption ကိုအသုံးပွုရနေချိန်မှာ, ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအော့ဖ်လိုင်းအားကာကွယ်ရန်. တိကျတဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်မှသတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်သူကိုဝန်ထမ်းမှသာလျှင် (ဥပမာ, သင်ကြားမှုသင်တန်းများ) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသနားနေကြတယ်.
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိသည်သို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့သညျဤ privacy ကိုမူဝါဒဖြင့်လိုက်နာကြသည်မဟုတ်ဟုခံစားရလျှင်, သငျသညျမှာအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်သင့်: privacy@usahello.org.